Antoine Griezmann Oo Mar Kale Khiyaamaynaya Kooxda Barcelona, Koox Kale Ayuu Heshiis La Gaadhay – Wararka Ciyaaraha Maanta
Antoine Griezmann Oo Mar Kale Khiyaamaynaya Kooxda Barcelona, Koox Kale Ayuu Heshiis La Gaadhay
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann oo si weyn loola xiriirinayo kooxda Barcelona ayaa u muuqda mid mar kale khiyaamaynaya kooxda Barcelona isaga oo heshiis la gaadhay koox kale.
Antoine Griezmann ayaa xagaagii hore ku ciyaaray adduunka markii uu kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid ku qabsbay in ay sugaan go,aanka uu ka qaadanayo mustaqbalkiisa isaga oo ugu dambayn go,aansaday in uu sii joogo kooxda Atletico Madrid.
5 Maalmood ka hor xiddiga ayaa sheegay in uuna garanayn meesha uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe warna u hayn meesha uu ku dambayn doono.
Griezmann ayaa si lama filaan ah go,aan u qaatay in uu isaga tagayo kooxda Atletico Madrid ka hor intii uuna xitaa dhamaan xilli ciyaareedkii hore.
Kadib markii uu go,aankiisa shaaciyay waxa xoogaystay wararka xiddiga la xiriirinaya kooxda Barcelona kuwaas oo sheegayay in ay Barcelona diyaar u tahay in ay bixiso lacagta 120 milyan ah ee lagu bur-burinayo heshiiskiisa.
Si kasta ha ahaatee wararka haatan soo baxaya ayaa sheegaya in uu Griezmann heshiis la gaadhay kooxda PSG iyada oo ay sabab u tahay diidistii qayb ka mid ah xiddigaha kooxda Barcelona iyo waliba taageerayaasha kooxda Barcelona.